DEG DEG+DAAWO: Wararkii ugu dambeeyay Ciidan ka soo goostay S/land oo ku biiray P/land & Saraakiisha oo digniin u jeediyay taliska Muuse Biixi
June 11, 2019 muqdisho Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta, Wararka Puntland iyo Somaliland 4
Warar cusub ayaa ka soo baxaya ciidamo Somaliland ka soo goostay oo soo gaaray dhanka Puntland,kuwaasi oo eedeyn kulul u jeediyay Taliska Somaliland ee Muuse Biixi.
Halkaan Hoose ka Daawo Wararkii ugu dambeeyay:-
Mandiqaddeena iyo ummaddeena Soomaaliyeed nimcooyin aan la qiyaasi karin oo dunida ugu qaalisan ayuu Eebbaheen ku galladay, waxaan se isku soo koobayaa labdada oogu doorka roon ee xusidda mudan.
1. Waxaynu nahay ummad mid ah marka ay sinji iyo sowrac iyo hiddo iyo dhaqan ba noqoto in kasta oo farqiyo yar yari iska jiraan oo caadi ah. Waxynu nahay ummad aanay cid kale ku tarrixin mandiqadda qaaradda Afrika ugu qaalisan ee ugu na straatijisan. Wax la qiimeyn karo ma aha.
2. Waxaynu leenahay mandiqaddaa dhan ee Afrikada Bariiyo Geeska Afrika kulmisay oo ay nala wadaagaan oo kali ah walaalaheena Canfarta ah. Qolo kale ee nagu tarraxdaa ma jirto. Waa mandiqad bad iyo birri ba ku fadhida dhul aad u baaxad weyn iyo xeebta dunida ugu dheer ee ugu na qaalisan oo laba marinood ay ku kulmeen.
Mandiqaddeenan waasaca ah nimcooyinka lagu baahay birri iyo baxar ba ma aha wax la qiyaaso karo oo waa na sababaha ay nacabyada shisheeye oo dhammi mandiqaddayada ugu soo wada qamaamayaan. Nafar iyo qoys kasta oo Soomaaliyeed ee dhammaan geyiyada mandiqaddeenan ku nool ayaa inta xaafado iyo aqallo casri ah loogu dhiso loogu sii dari lahaa adeegyada daryeelka oo bilaash ah iyo waliba lacag joogto ah bil kasta.
Bal maangaabnida fallaagadaha burburinta sha’niga iyo shimbirka Soomaaliyeed u taagan ee SNM iyo USC ummaddaas dhan iyo mandiqaddeedaa lama helaanka ah bay isu diiddan yihiin oo ay ka door bideen qaddiyad cunsuriyad lagu suntay ee qabiil magaciisa loogu dhimanayo oo laga dheefayo uun dibjirnimo, ragaad, rafaad iyo colaadyo iyo abaaro dabadheerada. Ummad dhan oo mandiqadda baaxaddaas dhan ku fadhida ayuu damacooda waalani ka tusay in ay geyiyo u sii kala jarjaraan oo ay cadawgu dhakada kaga wada istaagaan oo nimcooyinka ka faramaroojistaan iyaga oo aan reer hebel oogu kala aaba yeelin.
Riyodan iyo hiroshadan oo nimcadan aad ka samri la’dihiin waxaa halkaas manta dhigay waa idinka. Kaaga darane weli waxaad eeda saareysaan Isaaq iyo Hawiye. Daaroodse maba aha kii kala daadiyay Dad iyo Dal isku dhan oo dihin ah.
Shaleyna aabahaa iyo adeerayaasha ayaa ka indho iyo dhego la’aa waxaas oo nimco ah. Maantana idinkii ayaa isla suntii qubaya.
Qiiro jabaanta iyo cabaadka iyo oohinta intaad iska deysaan inba dhanka Illaahey raaciyay aayar oo dhalatay ha raaceen.
Caano aad qubteen shalay maanta inaad annaga dib noogu dhaleeceysaan sinaba u dhici meyso. Warankaas idinku taagan idinka kaa kor u tuuray ee ka dheefa dhaayuhuu dhalay. Halkaad ka toobad keeni laheydeen eed khaladaadkiina garowsan laheydeen ayaad annaga dib daalac noogu sii raaceysaan?
Sxb cabaadka joojiya. Labadii isku darsaday isku soo noqon meyso.
Kan khayaalka ku nool ee aan dhul iyo lahayn sal uu waddan ku noqdo waa adiga qudhaada ee ka soo toos qaraw maalmeedka.
Qabiil kooban oo Soomaali ka tiro badan geyi la wadaaga ayaad tahay ee ismacneyntan iyo suuradan khayaalka ku dhisan ninyahoow ka qajil oo iimaanso.
Siyaad Barre Daarood wuu ahaa laakiin Daaroodku ma aha Siyaad Barre. Shakhsi buu ahaa oo dawladdaas na Soomaali Maxamed baa ku dhannayd oo dembiyadii qaran ee ugu waaweynaa saraakiishii Isaaqa ayaa dadka iyo dalka ba ka soo galay.
Indhaha ha naga ciideyn maandhe taariikhda sacabbada ayaynu ku haynaa ee!
Siyaad Bare markuu dalka inqilaabka kula wareegay ciidankii Soomaaliya joogay waxay ahayeen Soomaali oo dhan. In yar dabadeedse Daarood oo dhanbaa direyska isku wada taxay. Beelaha Daarood ha’u kala badnaadeen. Laakiinse wixii intii danbe ku wareegsanaa waxey ahaayeen Daarood Miidhan.
Xitaa Xafiisyadii Dawlada ayaa mid Geela hada kazoo hadhay oo ay habeedii ka ureyso madax looga dhigay nin Jaamacad kazoo baxay oo takhasus shaqada uu hayo u leh.
Soomaali meesha ay joogto Daarood ayaa u horseeday oo Illaahey ku xamdiyi waayay Nimcadaas iyo Dhulkaas Balaadhan.
Siyaad Bare shakhsi ayuu ahaa. Yaase ku xeernaa oo uu talada la wadaagayay. Nin keli ahi waxba ma qaban karo hadaanu heysan rag ku xeeran oo la ayidsan firkrada xun ama iyaguba ka dhaadhiciya kuwo xunxun.
Hadey Dawladii Daaroodku khasaariyay ka fikirto horumarka dadka iyo Dalka manta sidaas dibabadaha ugamaad cabaadeen ee wadankaaga ayaad istareex ku ahaan laheyd.
Ka caba ceelka dhooqeysan maadhow.